के धूप बाल्दा देउता खुशी हुन्छन् त ? यस्तो छ धुप बाल्नुको अर्थ र महत्व - Nepal Insider
के धूप बाल्दा देउता खुशी हुन्छन् त ? यस्तो छ धुप बाल्नुको अर्थ र महत्व
भगवानको पूजा गरेपछि धुप किन बालिन्छ ? यो कुरा सायद धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । भगवानको पुजा गरेपछि धुप बाल्नुपर्छ भन्ने मात्र लाग्छ । त्यसैले बिहान (साँझ पूजापाठ गर्दा धुप बाल्ने गरिन्छ । तपाईंले भगवानलाई धुप किन बाल्नुभयो ? एकपटक आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् त । भगवानलाई प्रफुल्ल बनाउन ? वा पूजाआजाको विधी पुरा गर्न ? घरको पूजाकोठामा हेरौं, मठ(मन्दिरमा पुगौं, मुठाका मुठा धुप बालेको देखिन्छ । के धुप बालेर भगवान प्रशन्न होलान् ? वा यसको अरु कुनै फाइदा होला ?
– खासमा धुप बाल्नुको अर्थ र महत्व छ । यद्यपी त्यस्तो धुप बनस्पतिको पात तथा बोक्राबाट तयार भएको हुनुपर्छ । उच्च लेकाली भेगमा कोणधारी बनस्पति धुपीलगायत कतिपय वनस्पति हुन्छन्, जसको प्राकृतिक सुगन्ध हुन्छ । औषधिय गुण पनि । यस्ता वनस्पतिका पातलाई आगोमा बाल्ने गरिन्छ ।यसबाट आउने धुँवाले पर्यावरण र स्वास्थ्य दुबैमा फाइदा गर्छ भनिन्छ ।
– वायुमण्डलमा भएको दुषित किटाणु मार्न यस किसिमको धुपको प्रयोग गरेको पाइन्छ । वायुलाई शुद्धिकरण गर्ने विधी हो यो । घरमा विहान धुप बाल्दा त्यसको धुवाले हानिकारक जीवाणु नष्ट गर्छ र वायु शुद्ध गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
– धुपको प्रभाव शरीर खासगरी स्नायु प्रणालीमा पनि हुन्छ । प्राकृतिक वनस्पतिको धुपले हाम्रो स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । अरोमा थेरापी यसकै एक स्वरुप हो । सुगन्धको माध्यामबाट गरिने यो उपचार पद्धती सदियौं पुरानो हो । अहिले पनि यसको लोकप्रियता उस्तै छ ।
– प्राचिन समयमा रुख र पातबाट निस्कने तेलको प्रयोग गरेर त्यसको सुगन्ध लिने, मालिस गर्ने, वाफ लिने गरिन्थ्यो । यसैलाई आज एरोमा थेरापी भन्ने गरिउको छ । यसले शारीरिक, मानसिक रुपमा फाइदा गर्छ ।
– वनस्पतिको प्राकृतिक धुप
– सिन्के धुप अर्थात जो तयारी अवस्थामा बजारमा उपलब्ध हुन्छ त्यस किसिमको धुप उपयोगी हुँदैन । त्यस्ता धुप बालेर आफ्नो मनोकामना पुरा हुँदैन । भगवान खुसी पनि हुँदैन । बरु यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा हानी गर्छ । त्यो भन्दा पनि धेरै त पर्यावरणमा असर गर्छ।
– त्यसैले धुप बाल्ने भए वनस्पतिको धुप बाल्नु उपयोगी हुन्छ, जो प्राकृतिक रुपमा तयार गरिएको होस् ।
केही समयअघि गरिएको एक अध्ययनले तयारी धुपको धू्रँवालाई चुरोटको धुवासँग तुलना गरेका छन् ।यसको धुवा चुरोटको धुवा बढी बिषालु हुने शोधमा पाइयो । यस किसिमको धुवामा लामो समय बस्दा वा नियमित रुपमा धूपको धुवा सेवन गर्दा हाम्रो शरीरको डिएनएमा त्यस्तो केहि परिवर्तन गर्छ, जो क्यान्सरको कारण बन्न सक्छ ।अगरबत्तीको धूँवाको यस्तो छ असर दमको खतरा बढ्छ ।
अगरबत्तीको धूँवाले फोक्सोमा चुरोटले जतिनै असर गर्छ । यदि धूप बालेको स्थानमा धेरै लामो समयसम्म वा नियमित बस्ने हो भने, त्यसले छालाको संक्रमण हुनसक्छ ।अगरबत्तीको धूँवाले मस्तिष्कसँग जोडिएको नसालाई प्रभावित गर्छ । यसले टाउको दुख्ने समस्या पनि निम्तन सक्छ ।कति अगरबत्तीको ब्रान्डमा आइरन, म्याग्नेसियम र सिसाको मात्रा अत्याधिक हुन्छ । हाम्रो मृगौलाको काम को हि, शरीरको विषाक्त पदार्थलाई पिसाबको माध्याबाट बाहिर निकाल्ने । धूँवाको माध्यामबाट पस्ने विषाक्त तत्वले मृगौलालाई थप बोझिलो बनाउँछ।
Prev”प्रचण्डका पुर्व बडीगार्ड एसपी मल्लमाथि छानबिन हुनुपर्छ” : रवि लामिछाने
Nextदीपक मनाङेवाट मु’क्का खाएका गुरुङ उ’जुरी दिँदै, पत्रकार सम्मेलन गर्दै मनाङे
कुपन्डोलको बजाज सेन्टरमा आगलागी
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, तोलाको ८० हजार नाघ्यो
यी राशि हुने जोडीहरुको प्रेम सम्बन्ध कहिल्यै छुट्दैन
अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) (12565)